सत्ताको राप र तापमा देखिएको तमासा खबरमञ्च
२० असार, अधिवक्ता सानुराजा पुरी, at 7:06 PM
By खबर मञ्च / July 4, 2020 / Comments Off on सत्ताको राप र तापमा देखिएको तमासा
राजनीतिक दलको फुट, जुट र फेरि जुट अनिफेरि फूटको लामो श्रृंखला भएको राजनीतिक दलमा नेपालका कम्युनिष्टहरुको नाम आउने गर्दछ । वि.स.२००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सात दशकको अवधिमा सय चिरामा विभाजित भएको पाइन्छ । वि.स.०७४ साल असोज १७ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टी एकता गर्ने प्रतिवद्धताका साथ संयुक्त रुपमा संसदीय निर्वाचनमा जाने घोषणा भयो ।
संयुक्त घोषणापत्र र संयुक्त उम्मेदवारको घोषणाले जनताको व्यापक समर्थन र वाम गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त भएपछि वि.स.२०७४ फागुन ३ गते कमरेड केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । नेपालको इतिहास सबैभन्दा शक्तिशाली वामपन्थी सरकार गठन भयो । वि.स.२०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच पार्टी एकीकरण तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठनको घोषणा भयो । पार्टी समाजवादउन्मूख जनताको जनवादको सङ्क्रमणकालीन कार्यदिशामा जाने निर्णय भएको थियो । विभिन्न तहका पार्टी एकताका काम आज २०७७ साल असारसम्म पनि जारी छ ।
वि.स.२०७७ असार ४ गते संघीय संसद, राष्ट्रियसभाको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) समेटिएको संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छापमा सर्वसम्मतिले संशोधन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको र उक्त दिननै सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुबै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणिकरणको लागि पेश हुन आएको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो सशोधन) विधेयक, २०७७’ नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१०) बमोजिम प्रमाणिकरण गर्नुभएको थियो ।
नेपाल–भारत सीमाको नक्सा प्रकरणमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमती देखिएको थियो । भिमसेन थापा देखि गणना गर्दा ३८ औ प्रधानमन्त्री ओलीले मातृभूमिको रक्षाका खातिर एतिहासिक र साहासिक कदम उठाएका थिए । त्यसलाई सबै दलले साथ समर्थन र सहयोग गरेका थिए । तर आज भोली अदृश्यरुपमा छिमेकिका दलाल किन बन्दैछन र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न खोज्दैछन ? यस प्रश्नको जवाफ नेपाली जनताले खोजि रहेका छन् । देश र जनताको लागि राजनीति गरेको भनेर कहिले नथाक्ने बमापन्थीको बलियो सरकारले किन जनपक्षिय काम गर्न सकेन ? इतिहासले नेताहरुको कठोर र निर्मम समिक्षा गर्ने छ । यतिवेला मातृभूमिको रक्षाका लागि आवाज उठाउने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी धरापमा परेको वा वर्खास्त हुनुपरेको दःखान्त इतिहास नेपालमा लेखिने देखियो ।
नेकपा भित्रको सत्ता–संघर्षलाई लिएर कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले मंगलबार राति १ बजेर ३ मिनेट, मध्यरातमा ट्विट मार्फत सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो जहाज महाभुमरीमा हेलिने अनिष्ट सम्भावना नजिकिन थाल्यो ! अर्थात्, हामी हरेकले फेरि एकपटक विवेक र धैर्यको परीक्षा दिनुपर्ने भयो ! नहडबडाएर, एकताबद्ध भएर यसको सामना गरिनेछ ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि पार्टीभित्रको संघर्षलाई लिएर मंगलबार राति नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आदरणीय कमरेडहरू, एकपटक आफैँलाई हेरौं, अर्कालाई बुझौ, टाढा नजाऔँ, नजिक आऊँ, संवाद गरौ संवाद …
सामाजिक संजालमा आएका यस्ता भनाइ र नेकपा भित्रको प्रधानमन्त्री ओलीमाथि समकक्षी खनिएको यो पहिलो घटना भने अवश्य होइन । ओलीको सरकारलाई पाखालगाउने र आफनो इसारामा चल्ने सरकार बनाउने गृहकार्यमा बाम नेताहरुलेनै बाहय शक्तिलाई आमन्त्रित हस्तक्षेपको भिसा दिएका छन् । ओली सरकार बर्खास्त गर्न नेताहरुको व्यक्तिगत आग्रह, कुण्ठा र अहंकारको कारण एकतर्फ छ भने अर्को तर्फ भारत जसको क्षेत्रिय दादागिरी लाई बरकरार राख्ने नेपाल—भारत नक्सा प्रकरण र भारतीय संचार माध्यमले ओली सरकारलाई हटाउने एक सूत्रीय कोलाहाल, एमसीसीको गोलचक्कर र चीनको बि.आर.आई.मा नेपालको भूमिकामा चीन त्यति धेरै खुशी छैन । यि सबै परिस्थितीका बीचमा धेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्रीका पनि हजार कमजोरी र केही प्रतिशत गल्ती छ । ती सबैलाई संवादबाट हल गर्न सकिने ठाउँ हुँदा हुँदै पार्टी एकता टुट्ने र सरकार नै संकटमा परेको छ ।
आरोप प्रत्यारोपको भूमरीमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) परेको छ । दलगत स्वार्थ, आन्तरिक कलहको बीचमा करिब २ बर्ष अगाडि जोडिएको पार्टीको भविष्य र नेता कार्यकताको भाग्य के हुने ? पार्टीको नाममा दवाव र रवाफ देखाएका तथाकथित नेताको घैटोमा कहिले धाम लाग्ने हो ? अबका केही दिनमा यसको छिनोफनो हुने छ । फुटको सघारमा उभिएर एक नेताले अर्को नेतालाई खुइल्याउने वाक कला कम्यूनिष्ट पार्टीमा राम्रोसंग देखिसकेका कार्यकर्ता पक्ति निरास देखिएका छन् । नेकपाको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के गर्लान अब ? जिज्ञासा अनगिन्ती आईरहेका छन् । वर्तमान सरकारले प्रतिनिधि सभा विघठन गर्छ ? अर्को निर्वाचन गराउँछ ? संकटकाल घोषण गर्दछ आदि इत्यादिको सेरोफेरोमा नेपालको राजनीति धुमिरहेकोछ ।
संसद विघटको संवैधानिक ब्यवस्था के छ ?
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । अन्य उपधारामा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकमा मिलिजुलि सरकार, अल्पमतको सरकार आदिको व्यवस्था छ । वर्तमान सरकार बहुमतको सरकार भएकोले यसका दायित्व जिम्मेवारी, काम कर्तव्य र अधिकार सविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुँदै आएको छ । अब केपी ओलिको सरकारले संसद विघटन गर्न सक्छ कि ? सक्दैन ? गम्भीर बहस शुरु भएको छ ।
विगतका संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा (राजा) राष्ट्रपतिले संसद विघठन गर्ने अधिकार यस सविधानमा छैन । तर संविधानको धारा ७४ मा शासकीय स्वरुप बहुदलिय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने भनि सकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई मौजुदा संसदप्रति बिश्वास भएन अब जनतामा जानु उचित हो भन्ने लागेमा संसद विघठनको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्ने बाटो खुल्ला रहनेछ । प्रम ओलीले संसद विघठन गर्ने संवैधानिक आधार धेरै छ ।
सविधानको धारा १०० मा बिश्वासको मत र अबिश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । उपधारा १ देखि ७ सम्मको ब्यवस्था अनुसार केपी ओलीको सरकारलाई अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा सम्भावित र प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम समेत पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ । अब प्रधानमन्त्रीले संसद विघठन गरेमा के हुन्छ ? यसका कानूनी बाटा र पाटको पक्षमा चर्चा हुने छ ।
संकटकालको चर्चा सविधानको भाग–३० संकटकालीन अधिकार २७३. संकटकालीन व्यवस्थाः (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । यी अवस्था देशमा विद्यमान नभएकोले संकटकाल लागू हुँदैन ।
राजनीति सम्भावनाको खेल भएकोले सघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । नेपालको राजनीतिक कोश अबफेरि कोशीको धार जस्तो परिर्वतन हुनेछ ।
Published:4months ago on July 4, 2020
Last Modified: July 5, 2020 @ 7:15 am
बुधवार नेपाल आएका ‘रअ’ प्रमुख गोयल दिल्ली फर्किए
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता …
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका …